Nzọụkwụ nzọụkwụ site nzọụkwụ | Ihe omuma, intaneti na teknụzụ | Akụrụngwa Akụkọ (Peeji nke 2)
Otu esi eji uzo uzo di na oku vidiyo
Anyị na-aga n'ihu na-eji ngwa vidiyo na-akpọ vidiyo karịa ka anyị nwere ike iche. Mbugharị adịla, kemgbe ọ malitere ...
Etu esi arụ ọrụ na faịlị PDF na Microsoft Edge Chromium
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka ọ adịghị, Microsoft Edge bụ onye editọ dị egwu maka faịlụ PDF ma zute ọtụtụ mkpa ndị ọrụ.
Otu oku vidiyo nke ihe ruru mmadụ asatọ ruru WhatsApp, otu esi eme ya
Facebook etinyela batrị, ikekwe n'ihi mkpochi na otu ụdị ngwa ndị a si akụ ugbu a.
Etu esi ekekọrịta intaneti site na ekwentị na PC ma ọ bụ Mac
Anyị na-egosi gị nhọrọ dị iche iche ị nwere iji kesaa ịntanetị site na ngwaọrụ gam akporo ma ọ bụ iOS
Otu esi echedo profaịlụ gị ma ọ bụrụ na ịkekọrịta akaụntụ na Netflix
Ugbu a Netflix na-enye anyị ohere iji chebe profaịlụ ọ bụla na ntụtụ, iji gbochie ụmụaka ma ọ bụ ndị ọrụ ndị ọzọ ịnweta ya.
Anyị na-akọwa otu ị ga - esi jiri ndị ọbịa DMZ mepee ọdụ ụgbọ mmiri niile wee meziwanye njikọ gị nke ọma mgbe ị na - egwu egwuregwu vidio.
N'oge a, anyị ga-ekwu maka enwere ike ịchọta ihe onyonyo nke Google nyere ma anyị ga-akọwa etu ị ga-esi jiri ya
N'ebe a, anyị na-akọwa otu esi melite arụmọrụ nke egwuregwu na ngwaọrụ gam akporo anyị n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa.
Etu esi kenye òkè na akụkọ Instagram
Taa, anyị na-agwa gị otu esi etinye ndụ na akụkọ Instagram gị na otu esi ekesara mbipụta na akụkọ ndị ọzọ na ha
Etu esi eji listi mgbasa ozi WhatsApp
Taa, ọ dịghị mkpa ịkọwa ihe WhatsApp bụ, ma ọ bụ kọwaa ojiji ya, ma ọ bụ ewu ewu ọ nwere ...
Ihe dị ọhụụ na Android 11 Developer Beta na otu esi etinye ya
N'ebe a, anyị na-akọwa ozi niile dị mkpa nke gam akporo Developer Preview na-eweta, yana otu esi aga n'ihu na ntinye ya na usoro dị mfe.
Etu esi ewepu okwu na nkpuru okwu na Twitter
Anyị na-egosi gị otu ị ga-esi kpuchie okwu akọwapụtara ma ọ bụ ihe hashtags Twitter n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa. Site na ngwaọrụ ọ bụla
Otu esi eziga faịlụ buru ibu site na email
Ọ bụ ihe nkịtị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla, izigara anyị faịlụ, foto, akwụkwọ site na email ... Kama ibipụta ha, ndị ...
Etu esi ejikwa ngwaọrụ ọ bụla dị na ụlọ gị yana Alexa na Homelọ Google
Taa, anyị chọrọ igosi gị otu ị ga - esi jiri ngwaọrụ ọ bụla site na telivishọn gaa ikuku ikuku site na Alexa na Google Home mfe.
Inghụ ebe foto ahụ anyị ji ama ama, ma ọ bụ gam akporo ma ọ bụ iOS, bụ usoro dị mfe anyị zuru oke n'isiokwu a.
Otu n'ime isiokwu a ga-achọ n'ụlọ akwụkwọ, ọkachasị ugbu a ebe ọtụtụ ...
Etu ị ga - esi mara mgbe niile ma ọ bụrụ na ezuru WiFi site na iji ngwa ọrụ dị maka gam akporo ngwaọrụ
Etu esi ebu ikike ịkwọ ụgbọ ala na Smartphone anyị
N'ebe a, anyị na-akọwa otu esi ebu akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na Smartphone gị, yana akwụkwọ nke ụgbọ gị ma jikwaa ihe niile
Etu esi akwụsị ịhụ ọkwa na Instagram na-enweghị ịgbanye
Anyị na-amalite site na ntọala na nkezi bụ ịnweta otu ma ọ bụ ọtụtụ akụkọ n'etiti Instagram, Facebook, Twitter, wdg. Site…
Esi kewaa ihuenyo na Windows 10 na Mac
Ikesa ihuenyo kọmputa anyị, ma Windows ma ọ bụ macOS, bụ usoro dị mfe nke anaghị achọ ntinye nke ngwa ndị ọzọ.
N'ebe a anyị na-achọpụta otu esi elele ọdịnaya site na iPhone anyị na igwe onyonyo anyị, site na Google ChromeCast
Otu esi emewanye arụmọrụ Windows 10
Enweghi sistemụ zuru oke, enweghị. Onye ọ bụla n'ime ha, ma ọ bụ macOS, iOS, Android, distro ...
Etu esi eji ọhụụ Boomerangs ọhụrụ na Instagram
Instagram (nke Facebook Inc nwere) na-aga n'ihu na-eto eto n'ihi atụmatụ ọhụrụ ya. O guzoro onwe ya n'ime afọ abụọ gara aga ...
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịwụnye antivirus na Windows 10, ihe ị ga - emerịrị bụ ihe mbụ ị ga - eme bụ ịkwụsị Windows Defender, ma ọ bụghị na ị gaghị enwe ike iwunye ya.
Anyị na-egosi gị otu ị ga-esi ehicha ma chekwaa ohere na ngwaọrụ gam akporo gị n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma, na-enweghị mkpa maka ngwa ndị ọzọ.
Nyefe faịlụ n'etiti iPhone na gam akporo dị mfe na SnapDrop
Alternative iji nyefee faịlụ anyị na gam akporo ma ọ bụ iPhone karịrị obere oge n'ụzọ dị mfe iji njikọ Wi-Fi na rawụta ụlọ.
N'ebe a, anyị na-akọwa nzọụkwụ site na otu esi edebanye aha gị na saịtị ahụ yana gbakwunye weebụsaịtị iji nweta nkwa gọọmentị ma gbanwee ROM maka onye ọrụ Europe.
Site na nkuzi a dị mfe, anyị ga-akọwa etu esi ahazi ma wụnye Google Home maka ezigbo ụlọ anyị ma nweta ọtụtụ n'ime ya.
N'ime afọ iri itoolu na mbido 90s, piano bụ ihe eji eme ụbọchị, ọ bụghị naanị n'ihi ...
Esi gbanwee IP m
Chọpụta usoro kachasị mma anyị nwere ike iji ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe IP ọha na eze mgbe anyị jikọtara na Internetntanetị na kọmputa.
Etu esi eziga ozi email na-akpaghị aka
Bugharị email niile anyị nwere na akaụntụ email Gmail bụ usoro dị mfe maka ekele maka ngwa Multi Email Forward
Etu esi amata ma m bụ mgbọrọgwụ
Chọpụta nhọrọ nke ngwa gam akporo nke ga - enyere anyị aka ịmata ma anyị bụ mgbọrọgwụ na ekwentị iji nwee ozi a mgbe niile.
Etu ibudata egwu si Spotify
Chọpụta usoro iji nwee ike ibudata egwu ma ọ bụ pọdkastị sitere na Spotify gaa na ekwentị mkpanaaka gị na usoro ole na ole dị mfe.
Hichapụ vidiyo YouTube na ọwa ndị na-enweghị mmasị na mgbatị a
Chọpụta otu esi ewepu vidiyo ma ọ bụ ọwa na YouTube na ị nweghị mmasị na ikiri na webụ maka ekele na ndọtị na ihe nchọgharị gị.
Etu esi wụnye ngwa na iPhone na-enweghị App Store na AltStore
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmata usoro ọzọ anyị nwere iji wụnye ngwa na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod touch, a na m akpọku gị ka ị gụọ agụ.
Chọpụta ụzọ niile anyị nwere ike iji wepụ nọmba ekwentị anyị na Facebook ma gbochie netwọkụ mmekọrịta inwe ozi a.
Otu esi egbochi mkpọsa ntuli aka ka ọ rute na igbe ozi gị
Ntuli aka nke afọ a 2019 na-eru nso na Spain, mgbanwe nke Iwu Ntuli Aka n'oge 2018 nyeere ...
Chọpụta ngwaọrụ kachasị mma iji wepụ ihe onyonyo na vidiyo YouTube gị ma weghara oge site na vidiyo ndị ahụ.
Otu esi edozi ahụhụ na gam akporo nke na-agba batrị gị
Chọpụta otu esi edozi ọdịda a na-emetụta ụfọdụ ndị ọrụ gam akporo na batrị nke ekwentị ha.
Kedu ihe dị iche na 5G NSA na 5G SA
Choputa ihe di iche na ihe di nkpa nke 5G NSA na 5G SA ugbua ana ewepu 5G n’ahia.
Olee otú Ọkpụkpọ mpụga ike mbanye
Chọpụta ụzọ niile ị nwere ike isi jiri ya mee ihe mgbe ị na - ahazi kọmputa mpụta na kọmputa Windows, Mac ma ọ bụ Linux.
Otu esi achọta mmadụ na Instagram
Chọpụta ụzọ niile iji chọta mmadụ na Instagram yana ihe ị kwesịrị iburu n’uche mgbe ị na-achọ akaụntụ Instagram nke mmadụ
Ebe a ga-agụ akwụkwọ n'ịntanetị
Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-ahụ akwụkwọ na usoro dijitalụ, n'isiokwu a anyị na-egosi gị nke bụ weebụsaịtị kachasị mma iji gụọ akwụkwọ n'ịntanetị.
Kedu ka Skype si arụ ọrụ
Chọpụta nke bụ ọrụ kachasị mkpa na Skype iji mụta otu esi eji ngwa na kọmputa gị ma ọ bụ ama na ụzọ dị mfe.
Kedu ihe ndekọ akaụntụ na Gmail na otu esi ahazi ha
Chọpụta otu esi ekekọrịta gmail na otu esi ahazi otu ị ga-eji rụọ ọrụ ma nye ndị ọzọ ohere ị ga-enweta na leta gị.
Etu esi eji akara mmado Telegram na WhatsApp
Youchọrọ ibudata ihe mmado ndị ọzọ maka WhatsApp? Anyị na-agwa gị otu esi etinye akwụkwọ mmado Telegram na WhatsApp kpamkpam n'efu
Etu esi etinye nhazi na Google Maps
Chọpụta otu ị ga - esi tinye nhazi na Google Maps ma ọ bụ mara nhazi nke otu ebe ị na - achọ na maapụ ahụ.
Esi mepụta akaụntụ Skype
Chọpụta ụzọ niile iji mepụta akaụntụ Skype na kọmputa gị ma ọ bụ smartphone yana otu esi agbanwe ozi akaụntụ gị.
Otu esi eme index na Okwu
Chọpụta ụzọ anyị nwere ike isi mepụta ndekota n'ime akwụkwọ dị na Okwu na otu esi ahazi ọdịdị ha maka iji ha eme ihe nke ọma.
Etu esi debanye aha na Instagram
Chọpụta karịa otu ị ga - esi debanye aha na Instagram na kọmputa gị ma ọ bụ ekwentị gị. Explainedzọ niile kọwara.
Etu esi wụnye iOS 13 beta na iPhone na iPad si Windows na Mac
Ọ bụrụ n ’ịgbaala ịwụnye beta mbụ nke iOS 13, n’isiokwu a anyị ga - egosi gị otu esi eme ya ma Windows na Mac.
Etu esi tinye ụzọ mkpirisi na menu mmalite Windows
Anyị na-egosi gị otu ị nwere ike isi mepụta ụzọ mkpirisi na menu mmalite Windows na ndekọ ndekọ, faịlụ ma ọ bụ ngwa. You maara ka esi eme ya?
Esi wepu aha na HBO
Ọ bụrụ na egwuregwu nke oche n'ofe gafere, ị chere na oge eruola ịkagbu ndenye aha gị HBO, n'isiokwu a anyị na-egosi gị usoro niile ị ga-eso.
Esi dezie akwụkwọ PDF
Anyị na-agwa gị nhọrọ kachasị mma iji dezie PDF site na kọmputa gị: ibe weebụ, mmemme na ndị ọzọ. Muta otu esi agbanwe akwukwo PDF ebe a.
Otu esi emepụta paswọọdụ siri ike
Chọpụta akụkụ kachasị mkpa iji tinye akaụntụ iji mepụta paswọọdụ echekwara maka akaụntụ gị n'ụzọ dị mfe.
Etu esi eji Uber
Anyị na-akọwa n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa usoro iji soro Uber, ụzọ dị ọnụ ala karịa tagzi. Nweta € 5 maka njem mbụ gị.
Otu esi amata ma laptọọpụ m nwere Bluetooth
Chọpụta ụzọ niile dị adị iji nwee ike ịlele ma ọ bụrụ na laptọọpụ gị nwere Bluetooth, ma na laptọọpụ Windows na na Mac.
Etu esi bulite vidiyo na Facebook
Chọpụta otu ị ga-esi bulite vidiyo na Facebook na kọmputa gị yana na ngwa nke mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba maka gam akporo na iOS.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m gbochie mmadụ na WhatsApp
Chọpụta ihe ga - esi na ya pụta ma ọ bụrụ na ị gbochie kọntaktị na WhatsApp iji mara ihe ị ga - eme n'okwu ndị a ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ otu esi egbochi mmadụ.
Otu esi ehicha vinyl records
Anyị na-akuziri gị otu esi ehicha vinyl nke ọma ka ọ ghara imebi ha. Zere jumps na na ha na-emerụ site unyi.
Otu esi emebe ihe omume na Facebook
Chọpụta otu ị ga - esi mepụta mmemme na Facebook, ma ị na - achọ ịme mmemme nkeonwe ma ọ bụ mmemme ọhaneze. Kọwaa nzọụkwụ site na nzọụkwụ.
Etu esi ewepụ ndị na-eso ụzọ na Instagram
Chọpụta karịa gbasara atụmatụ nke iwepụ ndị na-eso ụzọ na Instagram. Etu esi ewepu ndi n’eso uzo ya na ihe bu ihe isi na ime nke a na akauntu m.
Otu esi ehichapụ ozi Facebook niile
Chọpụta ụzọ niile dị adị iji nwee ike ihichapụ ozi niile ị nwere na Facebook, ma na desktọọpụ gị na ngwa gam akporo gị.
Chọpụta ngwa kachasị mma iji mepee faịlụ CBR, maka PC, Windows, Mac, iOS ma ọ bụ gam akporo. Kedu ka esi emeghe faịlụ ndị a?
Kedu ihe CC na CCO pụtara
Chọpụta ihe ha bụ, otu esi eji ha na ọdịiche dị n'etiti CC na Bcc na akaụntụ email na Gmail ma ọ bụ nyiwe ozi email ndị ọzọ.
Etu esi lelee vidiyo YouTube na offline
Anyị na-egosi gị ihe niile ịchọrọ ilele vidiyo YouTube na-enweghị njikọ intaneti. Kedu otu ị ga-esi lelee vidiyo na YouTube na-enweghị data na enweghị njikọ?
Etu esi etinye ntanetị WEB Income tax site na ịntanetị
Anyị nọ na mkpọsa Ego mbata, oge a na-atụ ụjọ abịarutela nke ị na-agaghị agbanweli, opekata mpe otu ugboro n'afọ….
Esi hazie oge izipu ozi na Gmail
Na Eprel 1, 2004, onye na-enyocha ọchụchọ gosipụtara ọrụ email ya, a ...
Etu esi gbanyụọ akaụntụ Facebook m
Ike Gwụrụ nke Facebook? Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji mechie akaụntụ Facebook gị nwa oge ma ọ bụ hichapụ ya kpamkpam.
Chọpụta ụzọ dị iche iche iji hazie mbadamba gam akporo. Hapụ ya n'ụlọ ọrụ ka ọ gaa ngwa ngwa na enweghị mperi. You maara ka esi hazie mbadamba nkume gị?
Etu esi kewaa PDF
Mụta ịkekọrịta PDF n'ime ọtụtụ akụkụ, ma ọ bụ wepụ peeji sitere na ya, site na nkuzi a dị mfe na enweghị mkpa ịwụnye mmemme ọ bụla.
Etu esi bulite foto na Instagram site na PC
Chọpụta usoro ị ga - eso iji bulite foto na profaịlụ Instagram gị na PC gị yana usoro niile akọwapụtara.
Etu esi eji iCloud
Anyị na-akụziri gị otu esi eji iCloud site na ngwaọrụ ọ bụla n'ụzọ dị mfe. You maara uru dị na iCloud nwere? Chọpụta ha ebe a.
Etu esi ebudata foto na Facebook
Chọpụta ụzọ niile enwere ike ibudata foto site na Facebook ma na kọmputa gị ma na ekwentị gam akporo gị.
Etu esi ewepu nje na android
Chọpụta ụzọ niile iji wepu nje na gam akporo. Site na iweghachi, wepu ngwa ọdịnala iji ọnọdụ nchekwa na ekwentị.
Etu esi arịọ nkwenye nke akaụntụ Instagram m
Youchọrọ inyocha akaụntụ Instagram gị ma tinye akara na-acha anụnụ anụnụ? Soro usoro ndị a dị mfe iji chọpụta ihe ọ pụtara na otu esi enyocha akaụntụ gị.
Etu esi amata ma egbochiri m na Facebook
Chọpụta ụzọ niile dịnụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na mmadụ egbochila gị na Facebook ma ị nweghị ike ịhụ profaịlụ ha na netwọkụ mmekọrịta.
Vodafone TV bụ nke kachasị ọhụrụ iji sonyere katalọgụ ngwa Tizen OS, sistemu arụmọrụ maka Samsung Smart TV, anyị ga-egosi gị otu esi etinye ya.
Esi gbanwee aha WiFi na paswọọdụ
Mee ka nchekwa nke netwọọdụ WiFi gị dịkwuo elu site na nkuzi a dị mfe, wee mụta otu esi agbanwe aha ya na okwuntughe ya.
Etu ị ga-esi weghachite ozi ehichapụ Facebook
Chọpụta ụzọ ndị dịnụ iji weghachite ozi Facebook ehichapụ na kọmputa gị ma ọ bụ gam akporo.
Etu esi gbanwee Okwu na PDF
Chọpụta ụzọ niile enwere ike ịgbanwe akwụkwọ ederede na faịlụ PDF, ma ntanetị yana mmemme dịka Microsoft Word.
Esi tọghata oyiyi na akara ngosi
Tụgharị onyonyo n'ime akara ngosi iji hazie Windows nke anyị bụ usoro dị mfe nke anyị ga-akọwa na nkuzi a.
Otu esi emechi ngwa emeghe na gam akporo
Imechi ngwa na gam akporo bụ usoro nke na-adịkarị mkpa ka ọ bụrụ iwu maka ama anyị ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Etu esi agbanwe PDF na Okwu
Chọpụta ụzọ niile enwere iji gbanwee PDF n'ime Okwu. Wayszọ niile, site na ibe weebụ, Google Docs ma ọ bụ Adobe Acrobat kọwara nzọụkwụ site na nkwụsị.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na ezuru ekwentị m
Kpa ye ohi nke anyị ama, anyị nwere ohere ọ bụla nke na-agbake it? Anyị nwere ike inwe ihu ọma soro usoro ndị a wee nweta ya
Olee otú iji tọghata Video na GIF
Chọpụta usoro kachasị mfe ma kachasị ọsọ iji tọghata vidiyo ọ bụla n'ime GIF na-emegharị ma nwee ike ịkekọrịta ya na netwọkụ mmekọrịta gị
Etu esi e copyomi ma detuo na Mac
Anyị na-egosi gị ụfọdụ nhọrọ anyị nwere iji rụọ ọrụ nke i copomi na pasting na Mac yana ngwa a kapịrị ọnụ maka ya
Chọpụta otu esi eji Twitter: Mepụta akaụntụ, jiri hashtags na kwuru, nweta ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ zipu ozi nkeonwe na netwọkụ mmekọrịta.
Otu esi egbochi mmadu na Facebook
Chọpụta ụzọ iji gbochie mmadụ na Facebook na-enweghị onye maara ma ọ bụ onye ọrụ na-abụghị enyi gị.Gịnị bụ ihe dị iche na nhichapụ na igbochi?
Esi gbanwee okwuntughe Facebook
Chọpụta otu ị ga-esi gbanwee okwuntughe gị na Facebook ma ọ bụrụ na ị chefuru paswọọdụ ochie gị.
Esi usoro kọmputa
Chọpụta ụzọ niile dị ugbu a iji kọwaa kọmputa Windows ma ọ bụ draịvụ diski ike na ngwa ngwa
Anyị nyochaa Recoverit, data mgbake software
Anyị nyochaa Wondershare Recoverit, Kacha ọhụrụ na kasị dị irè data mgbake software na i nwere ike ịhụ na ahịa
Etu esi etinye mgbasa ozi na Wallapop
Anyị na-agwa gị otu esi etinye mgbasa ozi na Wallapop nke anyị ga-eme nke ọma na ire ere ahụ. You maara ka esi ere na Wallapop? Soro ndụmọdụ ndị a
Otu esi amado na Instagram
Chọpụta ụzọ ị ga - esi kpado foto na Instagram, ọ ga - ekwe omume tupu ị na - ebugote foto yana mgbe ebipụtara ya.
Kedu ka LinkedIn si arụ ọrụ
Chọpụta ihe niile gbasara LinkedIn: netwọkụ mmekọrịta maka ndị ọkachamara. Muta ihe banyere ihe netwok a bu na otu o si aru oru icho oru
Etu ị ga-esi bulite ọsọ nke netwọki WiFi gị
Mụọ otu esi emeziwanye ọsọ na nkwụsi ike nke netwọọdụ WiFi gị na nkuzi a dị mfe, ebe anyị na-agwa gị aghụghọ kachasị mma iji mee ya.
Etu ị ga-esi wepụta oghere na iCloud n'ụzọ dị mfe ma dịkwa ọsọ ma site na nke anyị iPhone na site na Mac
Chọpụta ụzọ anyị ga-esi gbanwee paswọọdụ nke akaụntụ Gmail anyị na otu esi emepụta okwuntughe siri ike.
Otu esi emebe peeji na Facebook
Anyị na-akụziri gị otu esi emepụta Facebook peeji nke ọ bụla site na nzọụkwụ maka weebụsaịtị, blog, ụlọ ọrụ ma ọ bụ obodo gị. Chọpụta otu esi ejikwa ya, lelee ọnụ ọgụgụ ma hazie ya
Etu esi ebudata vidiyo na Vimeo
Mụọ otu esi ebudata vidiyo site na Vimeo n'ụzọ anọ dị iche iche site na nkuzi a dị mfe.
Olee otú mara ma ọ bụrụ na m iPhone bụ free
Etu esi amata ma iPhone m enweghị ego tupu ịmalite ịzụta otu n’ime ekwentị ndị a
Chọpụta ụzọ na ngwaọrụ ndị dị mfe iji belata ịdị arọ nke foto na kọmputa gị wee chekwaa ohere.
Kedu ihe bụ Flickr na otu esi esi budata foto
Mụtakwuo maka nnukwu ikpo okwu dị na Flickr, ma mụta otu esi budata onyonyo na ogo kacha mma yana n'ụzọ dị mfe site na nkuzi a.
Otu esi eziga ọnọdụ site na WhatsApp
Kedu ka anyị ga - esi zipu ọnọdụ site na ngwa izipu ozi WhatsApp na ndị kọntaktị anyị
Etu esi wụnye ederede ederede na Mac gị
Ma ị maghị otu esi etinye ọtụtụ narị ụdị edemede ederede na Mac gị? Echefula nkuzi a ebe anyị na-agwa gị otu esi eme ya site na nkwụsị
Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram m
Chọpụta ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi hichapụ akaụntụ Instagram gị nke ọma, ma ọ bụ gbanyụọ ya nwa oge, kọwara site na usoro.
Ọ bụrụ n’achọghị ka mkparịta ụka nke ikwuru n’oge ọnwa iri na abụọ gara aga ga-efunahụ gị, ị ga-emerịrị nkwado ndabere tupu WhatsApp ewepụ ha
Etu esi ebudata vidiyo Facebook
Chọpụta ụzọ iji budata vidiyo Facebook na Windows, Android, Mac, na iOS n'ụzọ dị mfe na ụzọ na ngwaọrụ ndị a.
Esi gbanwee foto gị na Polaroid snapshots
Youchọrọ ịgbanwe ihe onyonyo gị ka ọ bụrụ na ejiri Polaroid were ha? Echefula nkuzi a dị mfe iji mee ka foto gị dị ka oge ọzọ
Mụta ihicha ihuenyo nke mkpanaka gị na mputa ya niile n'ụzọ ziri ezi, ngwa ngwa na enweghị nsogbu site na iji nkuzi a dị mfe.
Etu esi eji AirDrop na ngwaọrụ iOS na macOS
Anyị na-egosi gị otu esi eji AirDrop na iOS na ngwaọrụ macOS ịkekọrịta ụdị akwụkwọ, faịlụ, foto, njikọ Safari, wdg.
Chọpụta ụzọ anyị ga-esi budata vidiyo Instagram na ekwentị gam akporo gị, iPhone ma ọ bụ kọmputa na ụzọ dị mfe.
Anyị na-akụziri gị otu esi ehichapu iPad site na nzọụkwụ site na mgbe anyị chọrọ ire ya ma ọ bụ usoro ya ka ọ bido site na ncha nke mere na ọ na-aga ngwa ngwa.
Etu esi ebudata vidiyo na Twitter
Chọpụta otu esi ebudata vidiyo Twitter na ngwaọrụ gị, ọ bụrụ na kọmputa Windows, Android ma ọ bụ iOS. Anyị na-akọwa nzọụkwụ site na otu esi eme ya.
Etu ị ga-esi nwetakwuo ndị na-eso ụzọ na Twitter
Etu ị ga-esi nwetakwuo ndị na-eso ụzọ na akaụntụ Twitter gị. Chọpụta otu esi enweta ndị na-eso ụzọ na netwọkụ mmekọrịta ama ama.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na ekwentị m dabara na mmiri?
Chọpụta ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ekwentị mkpanaaka gị adaba na mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri na - eme mmiri
Etu esi achọta iPhone m furu efu
Etu esi enweta ndi n’eso ya na Instagram
Etu ị ga - esi nweta ndị na - eso ụzọ na Instagram na aghụghọ ndị a. Chọpụta ụzọ kachasị mma iji nweta ndị na-eso ụzọ na netwọkụ mmekọrịta.
Etu esi ebudata egwu sitere na Soundcloud
Mụta ụzọ dị mfe dị mfe iji budata egwu sitere na Soundcloud ma nwee ike ịnụ ụtọ egwu kacha mma na ngwaọrụ gị niile
Olee otu ịkpụzi pendrive na Mac
Otu esi eme ka komputa m ngwa ngwa
Otu esi eme ka kọmputa na-aga ngwa ngwa. Chọpụta ndụmọdụ na usoro ndị a iji mee ka kọmputa gị ọsọ ọsọ.
Wayszọ isii ịhapụ ohere na iPhone gị
Kedụ ka m ga - esi wepu ebe nchekwa na iPhone m? Soro nkuzi a dị mfe ma mara ụzọ isii iji chekwaa ohere na ebe nchekwa nke iPhone gị.
Wụnye Windows 10 site na USB bụ usoro dị mfe nke anyị kọwara n’isiokwu a.
Otu esi emepụta akaụntụ email
Otu esi emepụta akaụntụ email site na nkwụsị. Chọpụta otu esi emepụta akaụntụ gị na ndị na-eweta email kachasị.
Mụta ụzọ dị iche iche iji weghachi iPhone gị ma mee ka ọ dị ka ọ dị na igbe ahụ na nkuzi a dị mfe.
Etu esi eji WhatsApp na kọmputa gị
WhatsApp abụrụla usoro nkwukọrịta kachasị eji eme ihe n'ụwa, ma maka ihe ọma ma maka ...
Etu esi lelee faịlụ ezoro ezo
Sistemụ arụmọrụ niile, n'agbanyeghị ma ha nọ na ekwentị mkpanaaka, na njikwa, na igwe onyonyo smart ...
Olee otú m ga-esi m Apple ID azụ
Etu ị ga-esi weghachite foto sitere na mkpanaka
Chọpụta ụzọ anyị ga - esi nwetaghachi foto anyị hichapụ n’amaghị ama site na ekwentị anyị, ma ọ bụ android ma ọ bụ iPhone.
Esi eweputa nseta ihuenyo na Mac
Ọ bụrụ n ’ịmaghị ụzọ niile macOS nwere ike isi nye anyị mgbe ị na-ewere screenshots, site n’isiokwu a ị ga-ahapụ obi abụọ gị
Etu esi amata ma m nwere tiketi njem: ajuju, azịza na usoro
Chọpụta site na ụlọ na n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ị nwere okporo ụzọ dị mma site na isoro nkuzi a dị mfe.
Anyị na-akụziri gị otu esi ahazi Mac
otú usoro a Mac
iOS 12: gini bụ ihe ọhụrụ, ngwaọrụ dakọtara, otu esi etinye ya na ọtụtụ ndị ọzọ
Versiondị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Apple maka iPhone dị ugbu a maka nbudata. N'isiokwu a, anyị na-egosi gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara iOS 12
Etu esi egbochi nọmba ekwentị
Etu ị ga - esi gbochie nọmba ekwentị. Chọpụta ụzọ iji gbochie nọmba ekwentị na gam akporo ma ọ bụ iPhone gị n'ụzọ dị mfe.
Esi nyefee foto site na iPhone gaa na kọmputa gị
Mụta otu esi edepụta foto site na iPhone gị na kọmpụta gị iji chebe ha ma hazie ha n'ụzọ kachasị mfe.
Etu esi ebudata egwu sitere na Youtube
Etu esi amata ma ezuru m WiFi
Chọpụta ụzọ dị iche iche iji chọpụta ma ọ bụrụ na mmadụ na-eji WiFi n'ụlọ gị ma ọ bụ ebe ọrụ. Esi mara ma ezuru WiFi gị.
Zọ kachasị mfe iji budata vidiyo na egwu na YouTube
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata vidiyo na egwu na usoro MP4 ma ọ bụ MP3 na YouTube, echefula nkuzi a, ụzọ kachasị mfe iji mee ya.
Etu esi enyocha akaụntụ Instagram anyị
Amụma ụgha abụrụla otu nnukwu ihe ọjọọ nke netwọkụ mmekọrịta na afọ abụọ gara aga. Ekwuru m na n'ime afọ abụọ gara aga, Ọ bụrụ n'ikpeazụ ị gbara onwe gị ume iji nyochaa akaụntụ Instagram gị, n'isiokwu a anyị na-egosi gị usoro niile ị ga - agbaso iji nwee ike ime ya ngwa ngwa.
Esi gbanyụọ mgbasa ozi Netflix n'etiti isi
Ma ọ dịkarịa ala ugbu a, anyị nwere ike igbochi Netflix igosi anyị mgbasa ozi ya n'etiti isi, anyị na-egosi gị otu ị ga - esi mee ya.
Download ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ vidiyo ọ bụla na ndọtị a maka Chrome
Mụta otu esi ebudata vidiyo site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ibe weebụ ọ bụla na kọmputa gị maka mgbakwunye a maka Google Chrome.
Otu esi eji Citypaq de Correos na otu esi enweta ọtụtụ uru na ya
Anyị na-ewetara gị obere nkuzi ka ị wee nwee ike ịghọta nke ọma otu Citypaq si arụ ọrụ yana otu anyị nwere ike isi mee ka ọ dịrị anyị mfe iji mee ka ndụ anyị dị mfe.
Etu esi eziga eBooks na Kindu gi site na iji Telegram
Mụta ụzọ ọhụrụ, kachasị mfe na ngwa ngwa iji ziga akwụkwọ ọgụgụ kachasị amasị gị na onye na-agụ gị Kindle, site na Telegram
Otu esi emepụta listi ọkpụkpọ na egwu ị gere ntị kacha na Spotify
Mepụta listi ọkpụkpọ na abụ na ndị na-ese ihe ị na-ege ntị na nke kachasị na akaụntụ Spotify gị ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Etu ị ga-esi weghachite akaụntụ WhatsApp kwụsịtụrụ
Uzo ikpo okwu nke WhatsApp aburula ihe mbu nke otutu nde ndi oru. N'agbanyeghị adịghị ike anyị nwere Ọ bụrụ na anyị ahụla etu esi egbochi akaụntụ WhatsApp anyị, maka ihe kpatara ya, n'isiokwu a anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike isi nwetaghachi ya
Etu ị ga - esi achọpụta ma enwere adreesị ozi-e
Gaa na obi abụọ ma chọpụta ma e nwere adreesị ozi-e ahụ ị bu n’obi ma ị maghị ma ọ bụ eziokwu.
Etu ị ga-esi mara ma ihu akwụkwọ webụ adịghị mma
Na Akụrụngwa Actualidad anyị na-agwa gị aghụghọ dị mkpa iji mara ma ibe weebụ ọ dị mma.
Fortnite agaghị anọ na Playlọ Ahịa Google, kedu ka m ga esi esi wụnye ya?
Fortnite agaghị adị na Playlọ Ahịa Google, anyị na-egosi gị otu esi etinye Fortnite na gam akporo ka ị nwee ike igwu egwu.
Otu ọzọ nhọrọ ibudata music for free
Download music si ịntanetị na Mp3 format mfe na ngwa ngwa site na-eso nke a dị mfe nkuzi.
Otu esi ehichapu ozi Facebook m niile
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ihichapu usoro ụzọ post gị na profaịlụ Facebook gị, soro nkuzi a iji mụta otu.
PLC ma ọ bụ WiFi ugboro ugboro? Esemokwu dị iche na nke na-adabara gị dịka ikpe gị si dị
Anyị ga-akọwara gị ihe dị iche na PLC na WiFi repeater, yabụ ị ga-ama nke ị kwesịrị iji oge ọ bụla.
Otu esi eso 2018 International Champions Cup n'ịntanetị
Echefula otu nkọwa nke International Champions Cup 2018 football site na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka gị.
Otu esi egbochi akaụntụ Amazon gị kpamkpam
Mụta otu esi ehichapụ akaụntụ Amazon gị kpamkpam.
Etu esi zoo njikọ na Instagram ka ha ghara ịhụ m n'ịntanetị
N'ime Ngwa Actualidad anyị jiri nkuzi nkuzi lata, anyị na-akuziri gị otu esi ezo njikọ na Instagram ka ha ghara ịhụ m n'ịntanetị.
Otu esi echekwa na Netflix site na ịkekọrịta akaụntụ gị na ndị enyi anọ
Site n'ikekọrịta Netflix na ndị enyi anọ ị nwere ike ịchekwaa ọtụtụ ma nwee ọ enjoyụ na ọdịnaya enweghị mgbochi.
N'ikpeazụ! Anyị nwere ike ịwụnye mgbakwunye Chrome na Opera
Wụnye mgbakwunye Google Chrome kachasị amasị gị na Opera Browser iji mee ka ihe nchọgharị gị zuru ezu ma melite ahụmịhe onye ọrụ gị.
Esi mee ka akara ngosi ihe osise buru ibu na Windows 10
Ka nsụgharị nke Windows gbanwere, ogwe ọrụ ahụ ewerewo nnukwu ọrụ. Na Windows 10, ọ bụghị naanị na Ọ bụrụ na akara ngosi dị na taskbar pere mpe maka gị, anyị ga-egosi gị otu anyị nwere ike isi mee ka ha buru ibu ngwa ngwa.
Otu esi gbanye ngwa ngwa n'etiti akaụntụ njirimara Windows 10
Mgbe ọtụtụ mmadụ na-eji kọmputa, ma ọ bụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ, ọ na-atụ aro mgbe niile ka onye ọ bụla n'ime ndị na-eji ya, Eachdị ọ bụla nke Windows, na-enye anyị ụzọ ọhụrụ iji gbanwee n'etiti akaụntụ njirimara dị iche iche anyị mepụtara. na otu.
Etu ị ga-esi were ogo measurentanetị gị tụọ Ọsọ ọsọ, mita ọsọ kacha mma
Site na mbata nke ADSL, ogo nke njikọ intaneti n'ụlọ anyị were nnukwu mmụba, ma na ọsọ na ogo yana otu esi tụọ ọsọ nke njikọ ịntanetị gị na ule Ọsọ ọsọ, nke kachasị ọsọ, nke a pụrụ ịdabere na ya.
Etu esi hazie okirikiri mgbe ị na-aza ajụjụ Instagram
Anyị chọrọ igosi gị otu ị nwere ike isi gbanwee ndabere na Instagram site na ịza ajụjụ ndị ahụ ka ị wee nye onye nke ọ bụla ụdị anya.
Anyị na-enyocha igwe okwu HD Studio Signa site na Trust, onye izu oke gị zuru oke
Trust HD Studio Signa, enyi gị zuru oke maka iyi, ihe egwuregwu na pọdkastị nwere njiri mara ịkwụsị obi.
Olee otú ibudata MP3 na FLAC music si Deezer
Mụta otu esi ebudata abụ dị elu na 3Kbps MP320 na FLAC formats site na kọmputa gị n'efu site na Deezer.
Etu esi wụnye na jiri Windows 10 kpam kpam n'efu
Ọ bụrụ n ’ikpebibeghị ịnwale Windows 10 maka na ịnweghị ikikere ziri ezi, n’isiokwu a anyị na-egosi gị otu ị ga - esi wụnye ya n’efu na n’iwu
Etu esi etinye akwụkwọ mmado na Instagram Akụkọ mfe
Ugbu a ị nwere ike itinye akwụkwọ mmado na-enye ndị na-ekiri Akụkọ gị ohere ịjụ gị ajụjụ dị mfe, anyị na-egosi gị otu.
Kedu ihe incognito YouTube na gam akporo na otu esi eme ya
Ugbu a YouTube maka gam akporo etinyewo ọnọdụ incognito nke ya, yabụ anyị na-egosi gị ihe ọ bụ na otu esi eme ya.
Olee otu iji tọghata Images na PDF na Windows 10
Tụgharị ihe oyiyi na faịlụ PDF bụ usoro dị mfe nke ga-ewe naanị sekọnd ole na ole. Anyị na-egosi gị otu esi eme ya.
Etu esi ekenye ụzọ mkpirisi keyboard iji wepụ na Windows 10
Anyị ga-egosi gị otu ị ga - esi ekenye ụzọ mkpirisi igodo na ngwa Snipping na Windows 10.
Etu esi amata nke ngwa dị na akaụntụ Gmail anyị
Okwu nzuzo na-abụkarị ihe a na-ahụkarị. N’ụzọ dị mwute, nsogbu ndị a niile amalitela ike ọgwụgwụ ...
Otu esi eme ka onye nchịkwa naanị degara otu WhatsApp ozi
Anyị na-egosi gị otu ị ga - esi mepụta ma ọ bụ hazie otu ndị a nke naanị onye nchịkwa nwere ike ide iji mee ka WhatsApp bụrụ ebe ka mma
Kemgbe mmalite nke Windows 10 afọ atọ gara aga, ọtụtụ ndị ọrụ ejirila ngwa ngwa nabata ihe kachasị ọhụrụ ...
Etu ị ga-esi chekwaa data site na iji Spotify Lite, ụdị ngwa ngwa nke Spotify
Spotify Lite na-abịa Anadroid, anyị na-egosi gị otu ị nwere ike isi chekwaa data yana atụmatụ ya ma mee ọtụtụ egwu na ụdị "Lite".
Etu esi tinye egwu na Akụkọ Instagram
Anyị na-egosi gị otu ị ga - esi tinye egwu na Instagram Akụkọ site na ngwa ọhụụ a.
Glass Curve Elite, otu esi etinye iko kacha mma maka smartwatch gị
Anyị ga-akụziri gị otu esi etinye iko dị jụụ na igwe elekere gị, ma karịa ihe niile bụ àgwà nke Glass Curve Elite.
Etu esi ege ntị na ntaneti nke WhatsApp naanị site na isi
Anyị na-agwa gị aghụghọ nke na-enye gị ohere ige ntị na nke ọdịyo nke WhatsApp naanị, site na ntị nke oku.
Etu esi gbanyụọ nkwupụta sitere na IGTV ọhụrụ na Instagram
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịnata ọkwa na ekwentị gị oge ọ bụla ebudatara vidiyo ọhụrụ na IGTV Instagram, anyị ga-egosi gị otu anyị nwere ike isi zere ya.
Etu esi wụnye iOS 12 na iPhone ma ọ bụ iPad ugbu a ọ dịla n'ihu ọha
Izu atọ mgbe mwepụta nke mbụ iOS 12 Mmepụta beta, Apple mere ka ndị mmadụ beta izizi nke iOS 12 maka ndị ọrụ.
Etu ị ga-esi rụọ ọrụ ma mepụta ọwa IGTV, ihe ngosi onyonyo ọhụụ nke Instagram
Anyị ga-egosi gị otu ị ga - esi rụọ ọrụ ma mepụta ọwa na IGTV, igwe onyonyo ọhụụ Instagram.
Nweta ọtụtụ ihe na Netflix site na ndọtị ndị a maka Chrome
Ọ bụrụ na ị nwere PC ejikọrọ na kọmputa gị ma ịchọrọ ị nweta ọtụtụ ihe na akaụntụ Netflix gị, ebe a bụ ndọtị kachasị mma maka Chrome.
Ekwentị m anaghị akwụ ụgwọ? Anyị na-akụziri gị ka ị mara ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ama anyị enweghị onwe ya, ma ọ bụ jikọtara ya na onye ọrụ ya, ọ bụ mkpebi dị oke mkpa mgbe ọ bịara inwe ike iji ya na ndị ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị bu n'obi ire ya.
WhatsApp kwụsịrị igosi ọdịnaya nke ozi mgbe emelite iPhone na iOS 11.4
Mmelite kachasị ọhụrụ nke iOS 11.4 maka iPhone, na-emepụta esemokwu na WhatsApp na WhatsApp na-egosi ịkwụsị ma onye zitere ya na ọdịnaya ahụ, ma ọ bụ naanị onye na-ezigara ya.
Etu aga-esi bugharịa WhatsApp na kaadị SD
Needkwesịrị ịkwaga WhatsApp na SD nke ekwentị gị? Anyị na-akuziri gị otu esi egbochi WhatsApp ịnara ohere na ebe nchekwa mkpanaka gị na iji kaadị mpụga kama.
Etu esi egbochi kọntaktị na WhatsApp
Anyị na-egosi gị otu esi egbochi kọntaktị na WhatsApp maka iOS ma ọ bụ gam akporo. Ọ bụrụ na mmadụ akpasu gị iwe ma ịchọrọ ịgbachi ha nkịtị, soro nkuzi anyị. You chọrọ ịma ma egbochila gị na WhatsApp? I nwekwara ike ịchọpụta ndụmọdụ anyị.
Chọrọ inwe ike ịgụ ebook gị niile na Kindle ọbụlagodi na ha anọghị n'ụdị MOBI? Nọrọ jụụ n'ihi na Telegram na bot ya "Iji Kindle Bot" ị ga-enweta ya n'ụzọ dị mfe
Etu ibudata ọdịnaya Instagram gị niile
N'isiokwu a, anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike isi nweta otu ọdịnaya niile anyị bipụtara na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta Instagram, netwọkụ mmekọrịta dị n'okpuru nche anwụ nke Facebook.
Youchọrọ ịma ihe ngwa ndị ọzọ nwere ohere ịnweta data Google gị? Companylọ ọrụ Internetntanetị na-enye gị ohere ịmara ndepụta zuru ezu na iwepu ikike ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Anyị na-egosi gị otu esi eme ya
Etu esi tinye ụzọ mkpirisi keyboard na ngwa "Snipping" na Windows 8 na Windows 10
Chọrọ imepụta ụzọ mkpirisi keyboard maka ngwa Windows Snipping? Nke a bụ otu n'ime ụzọ iji malite ngwa ngwa ngwa na ịdị mfe n'ụdị macOS dị ọcha
Budata otu data anyị niile na Google
Ọ bụrụ n’ịchọ ịmata ihe Google maara banyere gị, n’isiokwu a anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike isi budata ọdịnaya niile anyị kesara yana nke anyị gara n’ihu na-eme mgbe anyị na-eji ọrụ ha.
Etu ị ga-esi nweta egwu na-enweghị eze maka vidiyo gị
Ebe nrụọrụ weebụ na-enye egwu na-enweghị eze aghọwo ihe na-ewu ewu na weebụ n'ihi ihe ịga nke ọma nke YouTube na ego ya, taa anyị na-ewetara gị ụfọdụ saịtị ndị ama ama iji nweta egwu efu.
Etu esi lelee ma hichapụ akụkọ ihe mere eme nke Google Maps
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na Google maara ebe ị na-agagharị, oge eruola ịkpọtụrụ ma hichapụ akụkọ ihe mere eme nke Google Maps
Nke a bụ otu esi eji Ọnọdụ Mgbado Anya ma ọ bụ Ọnọdụ Esemokwu na Instagram
A na-akpọ Ọnọdụ Eserese na Instagram na Focus Mode wee nye gị ohere iwere onwe gị na ọkwa ọzọ site na nyocha miri emi ya. Anyị na-egosi gị otu esi arụ ọrụ.
Etu esi edochi HHD ngwa ngwa maka SSD na laptọọpụ
Anyị ga-akụziri gị otu ị ga - esi jiri SSD na laptọọpụ dochie HHD n’ụzọ dị mfe, yana ndụmọdụ ndị dị mkpa ka ị nwee ike iji aka gị mee.
Etu esi kpochapụ akụkọ Google
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere Google na nzuzo na ị chọrọ ihichapu niile akụkọ ihe mere eme na Google echekwara banyere gị, n'okpuru anyị na-egosi gị niile nzọụkwụ na-eso na-enwe ike ihichapu Google akụkọ ihe mere eme. Wepụ ihe ọ bụla metụtara gị na Internetntanetị, ọnọdụ, ngwa na ndị ọzọ!
Otu esi eziga nnukwu faịlụ
Ọ bụrụ n’ịchọta onwe anyị ka anyị ziga faịlụ buru ibu, n’isiokwu a anyị na-egosi gị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nhọrọ dịnụ iji mee nke a ọsọ ọsọ na mfe.
Etu esi amata ole data mkpanaka nke ngwa ọ bụla na-eri
Na-echegbu onwe gị maka mmefu data nke ngwa ekwentị gị? You chọrọ ịma ka ole data ngwa dị ka Spotify, Netflix, YouTube, Facebook ma ọ bụ ndị ọzọ na-eri? Tinye ma chọpụta otu esi amata oriri data nke ngwa ọ bụla na ama gị.
WhatsApp gbatịrị oge iji hichapụ ozi ezigara
Guysmụ okorobịa si Facebook agbatịwo oge kachasị iji nwee ike ihichapụ ozi ndị anyị zigara na mbụ ruo ihe karịrị otu elekere.
Olee otú ndabere Gmail
You nwere ọkara ndụ na akaụntụ Gmail gị? Ọfọn, tupu njehie emee na ozi gị - na mgbakwunye - ga - apụ n'anya, mee nnomi ndabere. Anyị na-akọwa otu esi eme ya
Ọ bụrụ na ọ dị nwute na ekwentị gị furu efu ma ọ bụ zuo ohi na ị maghị ihe ị ga-eme iji weghachite ya, anyị ga-egosi gị otu anyị nwere ike isi wee gbalịa ịgbake ya ma ọ bụ gbochie ya kpamkpam.
Etu esi ogbi web peeji na Chrome
Egwuregwu vidio na-emekpa gị ahụ na ihe nchọgharị gị? Iji Google Chrome ị nwere ike mechie weebụsaịtị wee gosi gị otu esi eme ya
Egwuregwu dinosaur Google Chrome aghọwo ihe dị mma maka oge ndị ahụ nwụrụ anwụ anyị nwere ma ọ bụ maka mgbe anyị na-enweghị njikọ intaneti, na ngwaọrụ mkpanaka anyị na kọmputa anyị.
Etu ị ga - esi melite ama ama gam akporo iji mee ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ekwentị gam akporo anyị amalitela iji nwayọ karịa nke nkịtị, anyị nwere ike ịhọrọ itinye obere aghụghọ a nke ga-eme ka mgbanwe gaa ọsọ ọsọ na-enye mmetụta nke ọsọ anyị na-enweghị mgbe mmelite ikpeazụ.
Nyefee data si iPhone ka Android na ọtụtụ ndị ọzọ
dr.fone-enye anyị ihe ọzọ site na ya software na ga-ekwe ka anyị nyefee niile data anyị iPhone ka a ọhụrụ gam akporo na Anglịkan.
Etu ịtọọ oge mmechi akpaaka na Windows na Mac
Ọ bụrụ na anyị achọghị ka PC ma ọ bụ Mac anyị nọrọ ọtụtụ awa karịa ka ọ dị mkpa na ọrụ, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ mmemme mmechi akpaka, ma ọ bụ na Windows ma ọ bụ na Mac. Do ma ka esi eme ya? Anyi na akuziri gi otutu uzo iji mechie komputa gi n’oge ichoro.
Etu esi ejikwa ma gbanye PlayStation 4 gị na ntanetị nke Smart TV gị
Anyị ga-egosi gị otu ị ga - esi jikwaa PlayStation 4 gị na TV TV dịpụrụ adịpụ na - enweghị nsogbu ọ bụla.
Etu esi kesaa njikọ WiFi gị site na koodu QR
You naghị achọ ịnye data na njikọ WiFi ụlọ gị? Ọfọn, anyị na-atụ aro ka ị mee ya site na koodu QR
Otu esi edekọ ihuenyo na Windows 10 PC gị
Taa, anyị na-akọwa n'ụzọ dị mfe esi edekọ ihuenyo na Windows 10, site na ngwa ụmụ amaala na ngwa ndị ọzọ.
Nwelite Windows na-anọ n'ọtụtụ oge na-achọ mmelite yana ka ị nwee ike idozi ya n'ụzọ dị mfe anyị na-enye gị nkuzi a.
Kedu onye na-agbaghabeghị ngwa nbipute n'oge na-adịghị mkpa? Anyị na-ewetara gị usoro kachasị mma iji nweta nke kacha mma na ngwa nbipute gị wee hapụ gị.
Anyị na-akọwa otu ị ga-esi nwetaghachi paswọọdụ Gmail gị ma ọ bụrụ na ịchetaghị ya ma ọ bụ na ịnweghị ohere ịnweta ozi Google gị. Anyị na-akụzikwara gị ịgbanwe ya
Anyị na-agwa gị otu esi ehichapụ akaụntụ email gị niile n'ụzọ zuru ezu, n'agbanyeghị ma ha bụ Gmail, Yahoo ma ọ bụ Hotmail
Needkwesịrị ịhazi rawụta? Chọpụta ozi niile iji nweta rawụta ma gbanwee nhazi, paswọọdụ, ọdụ ụgbọ mmiri, aha netwọkụ na ndị ọzọ
Mekọrịta iOS ma ọ bụ gam akporo ificationsma Ọkwa na Windows 10
Anyị na-akọwa otu esi mekọrịta amamọkwa n'etiti ngwaọrụ nwere Windows 10 yana ngwaọrụ nwere gam akporo na iOS ka ị nwee ike ịme ka ndụ gị dị mfe
Uru nke ịrụ ọrụ na ntanetị abụọ
Abụọ dị mma karịa otu? Anyị na-aga ebe ahụ iji nyochaa uru na isi ọwụwa nke isoro ndị nlekota abụọ rụọ ọrụ.
Etu esi ebudata foto na vidiyo site na Instagram n'ụzọ dị mfe
Nbudata foto na vidiyo na Instagram dị mfe ma anyị ga-agwa gị otu esi eme ya na iOS, Android ma ọ bụ kọmputa gị. You ma ka esi ebudata foto na vidiyo site na instagram?
Etu esi eji akaụntụ email nwa oge
Need chọrọ email nwa oge? Anyị na-akọwa otu esi mepụta akaụntụ email nwa oge ịkwụsị ịnweta spam.
Otu esi eme nyocha Wifi
Otu nyocha WiFi na-eme ka anyị mara ma njikọ Wifi anyị ọ nweghị nchebe megide mmebi iwu nwere ike. Nwere ike ịpịgharị igodo WiFi? Chọpụta!
Ntanetị ọ na-aga nwayọ nwayọ? Echefula na ndụmọdụ na aghụghọ ndị a iji mee ka njikọ gị ọsọ ọsọ wee hụ ma ezuru WiFi gị.
Etu ị ga - esi melite PlayStation 4 gị ka ọ dị ugbua na ụdị femụwe kachasị dịnụ
Taa, anyị ga-ekwu maka otu esi emelite PlayStation 4 gị na ụdị ngwa ngwa kachasị ọhụrụ, ndị ọzọ Sony na-enye gị.
Pipe Pi: Were Ya Na Ndụ Oge Ezumike a Na Ndị Nduzi Ndị A Dị Ukwuu
Oge nnwere onwe buru ibu na-abịa, ọ na-ekpo ọkụ ịpụ n'ụlọ, ndị a bụ ndị nduzi kachasị mma iji nweta ọtụtụ n'ime Rasberi Pi gị.
Etu ị ga-esi gbakee oghere na ozi Gmail gị
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtọhapụ oghere na akaụntụ Gmail na Google Drive gị, anyị na-egosi gị ndụmọdụ 8 ị ga - agbaso iji nweta ya. Agbapụla ohere na Gmail